Fanangonana Fragments | Reef Resilience
Karazana fahafahana. Sary © Ken Nedimeyer
Raha te-hipetraka akanin-jaza sy zaridaina miorina amin'ny tany, dia tsy maintsy azo ny sombin-haran-dranomasina amin'ny mponina an'ala. Izy io dia azo atao amin'ny fanangonana haran-dranomasina mety, izay sombintsombin'ny haran-dranomasina na zanatany mitokana izay noforonina noho ny fanakorontanana ary tsy manana vintana firy intsony raha tsy milamina. Ny sisan-dranomasina dia azo angonina ihany koa amin'ny alàlan'ny fakana ampahany kely amin'ireo zanatany mpamatsy vola tsy miangona ao amin'ny toeram-ponenan'ny vatohara voajanahary. Ny fananganana akanin-jaza haran-dranomasina dia tokony hisy fiatraikany kely amin'ny mponina an-tanety.
Maro ny fisehoan-javatra na korontana mety hanome fahafahana hanangona ny haran-karena. Ohatra, ny sombintsombin'ny haran-dranomasina dia mety ho azo atao rehefa vita ny asa fanorenana amoron-dranomasina, oram-baratra, toeram-ponenana, na fanimbana loko. Ny sombintsombin'ny Coral avy amin'ireny korontana ireny dia mety hanana fiatoana lava kokoa raha tafaverina amin'ny vatohara izy ireo amin'izao fotoana izao teknika manamboatra na nifindra tany amin'ny trano famokarana izay ahafahana mamboly azy any aoriana.
Ny fomba fanao tsara indrindra sy ny fiheverana manan-danja rehefa mitahiry ny sakafon'ny haran-dranomasina:
Famaritana ny tranonkala mba hahazoana ny sombin-tsoratry ny vatohara
Safidy ny karazan-katsaka
Fomba fanangonana sombintsombin'ny haran-dranomasina mba hampihenana ny fahavoazana
Ny dingana voalohany dia ny hitady loharanon-karena azo avy amin'ny haran-dranomasina amin'ny alalan'ny fisafidianana tranokala izay mora azo avy amin'ny garderie. Maro ny antony tokony hodinihina rehefa mifidy tranokala azo ampiasaina. ref Anisan'izany ireto:
Toerana be mponina - hanangona fahalalana avy amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, famoahana fikarohana na tatitra, ary ny hafa azo fantarina momba ny toerana mety ho an'ny mponina ao anaty rafitra haran-dranomasina.
Manakaiky ny toerana misy ny zana-pokontany - Ireo tranokala akaiky ny garderie dia hamela ny fitaterana mora kokoa amin'ny sambo ho an'ny vatohara sy ny mety ho faty noho ny fitaterana. Ny mpanome am-bava tsara indrindra dia tsy mihoatra ny 30-60 minitra miala amin'ny kamboty mba hampihenana ny adin-tsaina mandritra ny fitaterana.
Isan'ny toerana - ampiasao tranokala maro araka izay azo atao. Izany dia hampiely ny fiantraikan'ny mponina anaty ary hampitombo ny mety ho fahasamihafan'ny fahasamihafana.
mamela - mahazatra ny fepetra sy fitsipika mifehy ny toerana, ary miresaka amin'ny fanomezan-dàlana ny masoivoho sy ny tompon'andraikitry ny governemanta momba ny sehatry ny fanangonana.
Ny ankamaroan'ny tetikasa famerenana amin'ny asa momba ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izay mifantoka amin'ny fampivoarana sy ny fampielezana ny mponina dia miavaka amin'ny hara-bato Acropora ary Pocillopora. Na izany aza, maro kokoa ny fikarohana atao amin'ny teknika mba hialana amin'ny karazam-boasary masira na vatolahy ao amin'ny farihy. Ny safidin'ny karazana karakarazo mba hanangona sy hiverenana any an-tanimbary dia tokony aseho amin'ny ankapobeny amin'ny tanjon'ny fandaharanao, ny karazam-pizarana, ary ny fanomezan-dàlana na ny fitantanan-draharaha. Ny karazan-tsakafo dia tokony ho faritana mialoha ny fisafidianana sy ny fametrahana ny trano fonenana, satria ny karazana sasany dia hanana ny filàna samihafa amin'ny toetry ny tontolo iainana sy ny toerana.
Ny fiompiana karazam-borona, ny genotypes ary ny endrika fitomboana dia mety hampihena ny lozam-pifamoivoizana sy ny haran-dranomasina tsy azo ovaina mandritra ny trangan-javatra mampitebiteby ny tontolo iainana. Ny fanangonana karazana haran-dranomasina amin'ny tontolo mitovy amin'ny akanin-jaza na amin'ny toerana famindrana azy dia mety hampihena ireo risika ireo ihany koa.
Ny firaiketam-pambolena ho an'ny famolavolàna mponina (izany hoe toy ny haran-koditra ao amin'ny garderie izay namboarina hampiroborobo ny fametavetana firaisana ara-nofo) dia tokony hanangona fahasamihafana ara-pananahana betsaka araka izay azo atao. Amin'ny tranga tsara indrindra dia ho fantatra ny karazana gorodona nentina tao amin'ny tanimboly karajia ary azo antoka ny firaketana an-tsakany ny haran-dranomasina, amin'ny alàlan'ny fambolena. Ny famakafakana ny genetika dia azo atao amin'ny alalan'ny fanangonana santiona kely (2-3 polyps) avy amin'ny colony, voatahiry ao amin'ny ethanol non-denaturated 95, ary mbola voatahiry mandra-pahalalana. Torolàlana fanampiny no omena ao amin'ny Guide Carpet Acropora Restoration. ref
Raha tsy azo tanterahina ny fampihorohoroana, ny safidy manaraka tsara indrindra dia ny hanangona fitaovam-pambolena avy amin'ny tranokalam-ponenana maro samihafa amin'ny sehatra goavam-be iray ary hitondra azy ireo ho toy ny génotypes samihafa ao amin'ny garderie. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovam-pambolahy dia tokony hifantoka farafahakeliny karazana gnotisma 15 isaky ny karazan-karakaina raha azo atao amin'ny fanabeazana sy famokarana zaza tsy ampy taona. Ny fanangonana dia tokony horaisina avy amin'ny faritra vatan'ny vatohara ara-batana na ny mponina mba hampitombo ny fahafahana hahazo karazana génotypes. ref
Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny maha-zava-dehibe ny fototarazo amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina sy ny fomba fanao misy dia azo jerena ao amin'ny Coral Genetics Webinar.
Tokony hoeritreretina koa ny fanangonana haran-karena fanomezana sy ny fomba ampiasaina amin'ny fikarakarana ny vatohara amin'ny toeram-ponenan'ny vatohara. Ny tanjona amin'ny ankapobeny dia ny hanangona haran-koditra ho an'ny garderie raha miteraka fahasimbana eo amin'ny toeram-ponenan'ny vatohara. Ny karazana fahafahana dia ny loharano mora mora indrindra ary mora azo avy amin'ny vatohara amin'ny alalan'ny fanangonana sombin-javatra, mametraka azy ao anaty tahiry toy ny plastika Tupperware, ary mitondra azy ireo any amin'ny garderie. Zava-dehibe ny manalavitra ny haran-dranomasina miaraka amin'ny mariky ny aretina (toy ny tavy mitsambikina skeleta), ny fiainana an-jatony vao haingana, na ireo sponges mampihetsi-po, mba hampihenana ny fampidirana ireo zavamahadomelina ireo any amin'ny garderie. Raha misy kôlônan'ny fahafahana midika ho kolonisa lehibe, dia azo angonina ireo ampahany kely amin'ilay zanatany izay miseho amin'ny fahasalamana.
Fanangonana sombintsombin'ny Acropora cervicornis. Sary © Ken Nedimeyer
Ny sombintsombin'ny coral ihany koa dia azo avy amin'ny sombin-javatra madinidinika amin'ireo zanatany mpamorona. Ho an'ny vatoharan-java-maniry, dia azo ampiasaina ny sombin-tsokosia amin'ny menaka varahina tsy tapaka, ireo diagonal elektrika, ireo kofehy fanjaitra na ny PVC. Ny famolahana ny sampana madio sy mitovy dia afaka manampy amin'ny fiantohana tsara ny tebiteby sy ny fanasitranana ary ny fahasitranana ho an'ny mpanjanaka. Fa Acropora cervicornis, hatramin'ny faran'ny 10% isaky ny colony dia mety hiparitaka tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny zanapeo mpamatsy. ref Ny fanangonana dia tokony halaina avy amin'ireo zanatany mahasalama izay manana loko matsiro sy vatomamy avo lenta (90-100% cover coverage amin'ny tontolon'ny kolontsaina manontolo). Mba hampihenana ny adin-tsain'ny zanabola mpamatsy vola dia tokony hitranga mandritra ny volana mafana kokoa ny fihenan-tsakafo rehefa ambany kokoa ny fihenjanana ny hafanana (ohatra: Desambra hatramin'ny Mey any Karaiba).
Mba hahazoana antoka fa nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny toeram-ponenana voajanahary voajanahary, dia nanoro hevitra fa ny mpanjono mpamorona dia marihina sy hanara-maso rehefa vita ny fanangonam-bokatra. Azo ekena ihany koa ny fanaraha-maso sy fitazonana karazana génotype samihafa ao amin'ny garderie. Azo atao amin'ny fampiasana GPS izany ary manamarika ny vodiny mifanaraka amin'ny koloniana miaraka amin'ny marika na marika manokana. Ny data tokony horaisina mandritra ny fisokafan-javatra voalohany dia tokony hampidirina: ny habetsahan'ny colony (farafara ambony sy ny haavony), vatomamy mivantana (hatramin'ny 10% akaiky indrindra), ary ny fepetra amin'ny kolony (ohatra, lozam-pifamoivoizana, mpiremby na fanatrehan-tena).
Fitaterana any amin'ny farihy
Fomba maro no nosedraina ho an'ny fitaterana siramamy ho an'ny kodiarana, fa ny fomba tsara indrindra dia miankina amin'ny lojistikana amin'ny tranokala tsirairay, toy ny hoe lavitra ny trano famakiam-boky avy amin'ny tranonkala mpanome. Ny fragments dia tsy tokony hifindra any amin'ny sehatra (in situ) zaridaina mihoatra ny 500 km miala ny toerana niaviany tany an'ala. Matetika no napetraka ao anaty kitapo matevina, fonosana plastika na siny ny fivalanana mba hanomezana fomba tsotra sy azo antoka ho an'ny fitaterana sombin-javatra ary koa ny fitazonana hafanam-po samihafa.
Mba hahazoana antoka fa ho tanteraka ny sombin-tsakafo, ny fitaterana any an-tsekoly dia tokony hitranga haingana araka izay azo atao rehefa vita ny fanangonam-bokatra. Tokony hotehirizina ao anaty zaridaina ny tavy. Tokony horaisina ny fepetra mba hisorohana ny fihenjanana mivaingan'ny hafanana na ny fiparitahan'ny masoandro amin'ny alàlan'ny fanoniana siny amin'ny sira madio ary ny fikarakarana ny haran-dranomasina.